चर्चित स्वीस बैंकमा कसरी खोल्न सकिन्छ खाता ? कति लाग्छ शुल्क ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > चर्चित स्वीस बैंकमा कसरी खोल्न सकिन्छ खाता ? कति लाग्छ शुल्क ?
पोष्ट गरिएको असार. ०७, २०७८ मा ३:३१ मध्यान्ह असार ७, २०७८
क्लिकमान्डु २०७८ असार ७ गते १५:०९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । व्यक्तिगत विवरण नदिने भएकाले संसारभर नै स्वीस बैंकलाई सुरक्षित मानिन्छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार सो बैंकमा नेपालीले ४६ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार २५१ बराबर रकम जम्मा गरेको पाइएको छ ।
सो बैंकमा नेपालीको बचत सन् २०१९ सम्ममा २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार ८ सय १० रुपैयाँ थियो । सन् २०२० मा त्यो बढेर ४६ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
सो रकम कसो र कति नेपालीको हो भन्ने बारेमा कुनै विवरण सार्वजनिक छैन । सो बैंकले बचतकर्ताको विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुका अनुसार स्वीस नेशनल बैंकले नेपालसहित विश्वभरका नागरिकको के कति मौज्दात छ भनेर विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सन् १९९६ देखि २०२० सम्म नेपालीले ६६ अर्ब १९ करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । नेपालीले सो बैंकमा राखेको रकम बेला बेला झिक्ने गरेको पाइएको छ ।
सो बैंकका के कसरी खाता खोल्न सकिन्छ भन्ने विषय समेत यसमा जोडिएर आउँछ नै । बेला बेलामा सो बैंकमा राखिएको पैसा नेपाल फिर्ता ल्याउने विषयमा समेत चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक खपतका लागि त्यस्ता विषयमा भाषणबाजी गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय पनि यसमा जोडिएर आउँछ ।
कालो धन फिर्ता ल्याउने भनिए पनि काम भने भएको छैन । तर, सो बैंकका के कसरी खाता खोल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल जस्तै, भारतीयको समेत सो बैंकमा ठूलो मात्रामा पैसा गरेको पाइएको छ । सन् २०२० मा २० हजार ७०० करोड भारु बराबर रहेको छ ।
बेला बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत विदेशमा रहेको कालो धन फिर्ता ल्याउने भाषण गरेर निर्वाचन जितेका थिए । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि झनै स्वीस बैंकमा पैसा राख्नेको संख्या र मात्रामा गुणात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ ।
सो बैंकका खाता खोल्नका लागि १८ वर्षभन्दा माथिका जो कोही पनि योग्य हुन्छन् ।
अनलाइन बैंकिङका लागि इमेल वा बेवसाइटबाट पनि आवेदनका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको अनुरोधका आधारमा बैंकका एक प्रतिनिधिलाई अर्लट गरिन्छ । ती प्रतिनिधिले खाता खोल्न चाहने व्यक्तिलाई सबै प्रक्रियाका बारेमा गाइड गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसका लागि भ्यालिड पासपोर्ट दिनु जरुरी हुन्छ । यस्तै, स्वीस बैंकको शाखा भारतमा समेत भएकाले सक्कली पासपोर्ट दिन पनि सकिन्छ । यस्तै, कुन स्रोतबाट आएको पैसा हो, त्यसको समेत जानकारी दिनुपर्छ । त्यो भनेको तपाईंको कमाई नोकरीबाट आएको हो वा व्यापार केबाट कमाई भएको स्पष्ट भन्नुपर्ने प्रावधान हाल राखिएको छ ।
यस्तै, खातावालाको जानकारी राख्नका लागि एक भेरिफिेकशन पनि आवश्यक रहन्छ । त्यति भएपछि बैंकले भेरिफिकेशन कोड अर्थात् कन्फर्मेशन कोड उपलब्ध गराउँछ ।
सो बैंकका खाता खोल्नका लागि न्यूनतम १ हजार अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने कारोबारका लागि इन्टरनेशन ट्रान्जिक्सन शुल्क समेत लिन्छ । भारतमा यो बैंकको खाता खोल्नेले अकाउण्ट सञ्चालनका लागि समेत शुल्क तिर्नुपर्दछ । यस्तो शुल्क ५ देखि १० डलर गरेर वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्दछ ।
क्रेडिट कार्ड वा डेविड कार्डका लागि १६ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्दछ । यस्तै, वार्षिक रुपमा मेन्टिनेन्स शुल्कका रुपमा शुल्क लिइन्छ । त्यो शुल्क हरेक कारोबारमा ८० रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ ।
सो बैंकका खाता खोल्न जाने व्यक्तिको खास पहिचान हुँदैन
क्लिकमाण्डु असार ७, २०७८
कृषि विकास बैंकले कर्जाको हर्जानामा शतप्रतिशतसम्म छुट दिने
नेप्से ७१ अंकले घट्यो, नारायणी विकास बैंकको सेयरमा सकारात्मक सर्किट